काँग्रेस देखी बाबुराम सम्म भारतबाट बुहारी आउने बित्तिकै नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा उत्रिए पूरा हेर्नुहोस
June 22, 2020 June 22, 2020 by साहारा संदेश
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने नि,र्णय लिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले विरोध जनाएको छ ।नेकपाको सचिवालय बैठकले शनिबारउक्त निर्णयलिएपछि रातोपाटीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले त्यसको वि,रोध जनाएका हुन् ।
निधिले भने, प्रधानमन्त्रीको चाहना अनुसार विहीबार हामीले बालुवाटार पुगेर हाम्रो कुरा राखेका थियौँ । हाम्रो पार्टीको आधिकारिक धारणा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई कायम राख्नुपर्छ । यसमा कुनै किसिमको संशोधन जरुरी छैन भनेर भनेका थियौँ । उहाँले पार्टीमा छलफल गरेर तपाईँलाई खबर गर्छौँ भन्नुभयो । अहिले उहाँले एकतर्फी नि,र्णय गर्नुभएकोमा हामीलाई दुख लागेको छ ।
यसप्रति म खे,दप्रकट गर्न चाहन्छु । निधिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न कुरामा आफूहरुको सहमति नहुने पनि प्रष्ट पारे । उनले भने,अहिले कै व्यवस्था कायम रहनुपर्छ । सरकारले गर्न लागेको संशोधनमा पक्षमा हामी छैनौँ । हाम्रो धारणा यही हो । नेकपाको कदम निन्दनीय भएको भन्दै यसले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र साम्प्रदायिक द्धन्द्ध सिर्जनाको विजारोपण भएको निधिको ठहर छ । मिडियामा आएको समाचार साँचो हो भने यो अत्यन्त निन्दनीय काम हो ।
यस्तो किसिमको बन्ने कानुनलाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ, निधिले व्यक्तिगत धारणा सुनाउँदै भने, ‘यसले के पुष्टि हुन्छ भने देशमा कम्युनिस्टको सरकारले सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक र साम्प्रदायिक द्ध,न्द्धको वि,जारोपण भएको मेरो ठहर छ । यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो । सम्बन्धित सबैलाई यसबारे बेलमै सचेत हुन आग्रह पनि गर्दछौँ ।
यस्तै काँग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले काँग्रेसले आफ्नो धारणा प्रधानमन्त्रीसामु राखिसकेको भन्दै सरकारले सहमतिको बाटो नरोजेको बताए । नेकपाको नि,र्णयबारे पार्टीभित्र छलफल गरेर काँग्रेसले आफ्नो पोजिशन प्रस्ट पार्ने उनले बताए ।नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा सहमति वातावरण नबनेपछि बुधबार सरकारले सहमति जुटाउन
थप ५ दिन समय मागेको थियो । सहमतिको वातावरण तय गर्न विषयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बिहीबार काँग्रेसको धारणा बुझेका थिए । काँग्रेसले २०६३ सालको नागरिकता ऐन अनुसार नेपालीसँग बिहे गरेर आएकी विदेशी बुहारीलाई तत्काल नेपाली नागरिता दिनुपर्नेमा अडान दोहोर्याएको थियो । यस विषयमा काँग्रेससँगै जनता
समाजवा,दी पार्टी पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा वर्तमान व्यवस्था कायम हुनुपर्ने पक्षमा छ । प्रदेश २ को मुख्य न्यायाधिवक्तामा दिपेन्द्र झाको ट्वीट रिट्वीट गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता डा. वाबुराम भट्टराईले पनि नेकपाको निर्णयप्रति विमति प्रकट गरेका छन् ।
Prevभीम रावललाई मन्त्री बनाएर भएपनि एमसीसी पारित गर्ने तयारी के यो होला त ?
NextMCC को बिरोध गर्ने खातेहरुको टाउको काटछु भन्दै आए एक युवा भिडियो सहित